चितवन मेडिकल कलेजमा पहिलोपटक कलेजो पत्यारोपण « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2021 March 25, 12:19 pm
चितवन १२ चैत। चितवन मेडिकल कलेजले कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरको अस्पतालमा पहिलोपटक कलेजो पत्यारोपण गरिएको हो ।कलेजले बिहीबार बिहान भरतपुर पत्रकार सम्मेलन गरी भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १० निवासी ५४ वर्षकी धनकुमारी लामामा कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गरिएको जनाएको छ ।
कलेज प्रत्यारोपणका लागि २५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने कलेजले जनाएको छ । सरकारले कलेजो प्रत्यारोपण गराउने बिरामीलाई सरकारले केही सहयोग गरे अझै सस्तोमा गर्न कलेज तयार रहेको डा. न्यौपानले बताए । कानुनी जटिलताहरुलाई फुकाउँदै सहज बनाएर केही सहयोग गरे प्रत्यारोपणको दर नेपालमै बढाउन सकिने डा. न्यौपानेको भनाइ छ ।-दृष्टिबाट/File Photo